Uma une ekhanda sore (uma wathinta, noma ekupheleni kosuku), ungacabangi ukuthi uwedwa. Ezindabeni ezinjalo, abantu bavame ekukhonondeni, futhi ngokuvamile nomunye, hhayi udokotela. Abantu bacabanga ukuthi funny, akuyona uphawu sina ukuthi kuzodlula ngawodwana, ngokuvamile alisho lutho mayelana nesimo jikelele impilo. Nokho, lokho akulona iqiniso. Yiqiniso, lapho kubuhlungu ekhanda, izizathu ngokuvamile zidinga ukunakekelwa eduze wezokwelapha, kodwa zikhona izikhathi lapho ufuna ukuzisusa ngaphandle uchwepheshe iseluleko kungenzeka. Cabanga ngawo wonke amaqiniso abangela ukungakhululeki ezinjalo.
Isizathu sokuqala: izinwele umnqwazo
Kufanele kubhekwe abesifazane kwasekuqaleni, ikakhulukazi labo abangakwazi ngiziqhayise aluhlaza okunethezeka "mane" kanye zezinwele yokubukisa. Uma kusihlwa ubuhle enjalo ekhanda sore ngesikhathi umqhele, kungenzeka kakhulu ngenxa ukustaka waqiniswa izikhonkwane, izinwele Ukugunda kanye bands zenjoloba. izinwele obukhulu eside nesisindo hhayi kancane ngakho futhi wadonsa isikhumba ngempela kangako. Futhi uma ebambelela ngokuqinile some, umthwalo luyanda nakakhulu. Ngezinye ukuqhakaza izinwele zezinwele ushintshe indawo, laba bafikile ukubashaya lindela suku, futhi ngenxa yalokho lady ekhanda sore touch, ngisho okuncane kakhulu. Kulezi zimo kwansuku wena nje ukunikeza siphumule ngokwengeziwe ikhanda lakhe: cha ukuqoqa izinwele ngezimpelasonto chaza kubo, lapho efika ekhaya evela emsebenzini. izinkinga esifanayo singenzeka uma umuntu ezikubambayo kakhulu cap, wadluliswa ngu izitsha. Kukhona nje ufuna ukushintsha ingubo.
Isizathu sesibili: imikhiqizo ukunakekelwa
Ikakhulukazi ezivame ukusetshenziselwa amashampu ezijatshulelwa nsuku zonke. Futhi uma umuntu Ubuye umkhuba ushintsho njalo kubo befuna engcono, ingozi nobuso ukuqaleka echazwe is kakhulu anda. Ngokuvamile kubuhlungu ngaphansi ekhanda kwabesifazane eziphoqelelwa yokusebenzisa izinwele wemvelo: it is desiccate kakhulu esikhumbeni futhi buthakathaka. Ngaphezu kwalokho, kungase kube ukusabela iguliswa zonke lezi okhilimu, upende, amashampu kanye buso. Uma usola ukuthi lokhu imbangela okufanele babe Sokuzivikela kuya amakhambi emvelo: uxubha ikhanda Iziphungo herbal, kanye buso ukuba esikhundleni nedlanzana uLwandle Lukasawoti wagcoba esikhunjeni ngenkathi ukugeza.
Isizathu sesithathu: ukucindezeleka
Ngokuvamile kuyamlimaza ekhanda lapho wathinta futhi kubantu, ikakhulu njengoba hhayi esithambekele ukukhala futhi bakhononda hoard amandla ngaphakathi kuwe. Akunjalo ngempela lezi emizweni zenzeka ngokushesha nje emva kokuba lanyakazisa izinzwa, ikakhulukazi hhayi usuku olulodwa - bangakwazi "uhambisane" ngeviki. Kodwa uma ubona isibonelo "enkingeni - ubuhlungu ekhanda," baphuze ngemuva kosuku omatasa, sine omnene ezifana valerian inkosi ukuphumula uhlala.
Isizathu ezine: ukungawuvivinyi umzimba
Ukungawuvivinyi umzimba akuyona kuphela isisindo okweqile kanye nemisipha flabby. ukuma okuyisidina ukuthi ubambe ukuze ngosuku obekusetshenzwa ngalo (computer, isibonelo) kuholela ukusebenza abampofu izitsha, kanjalo kabi ekhanda futhi touch ngisho ukujikeleza kancane. Zama ophoqelelwe baxhashazwe okungenani amahora ukushintsha isikhundla noma njalo ngehora ukuhamba - ake ehhovisi futhi ngeketela, kodwa abahambayo. Futhi umnene massage isikhumba imizuzu 2-3 uyakwazi ukuvimbela izinkinga esikhathini esizayo.
Isizathu Five: ushintsho isizini
Kwezinye abantu, njalo uwa noma zonke entwasahlobo ekhanda sore. Okufanele ukwenze kuleli cala? Ukuzinakekela kusengaphambili. Akungatshazwa ukuthi nobuhlungu obubangelwa i-beriberi entwasahlobo. Ngakho, cishe wazi, nxa usufike exacerbation yangezinkathi ezithile, ngaphambi nje kokuba alandise kufanele baphuze inkambo amavithamini aqinisayo ayekulezo. ngokuvamile Autumn "ukuhlaselwa 'zenzeka kubantu meteodependent futhi zibikezela okuseduze sezulu ushintsho. Amavithamini nazo ngeke engadingekile. Kodwa ngalesi sikhathi, kufanele ngokuhlanganiswa valerian efanayo, okuyinto kunciphisa ezifweni zonyaka zishintsha.
Isizathu eziyisithupha: Usizo
Futhi yena, yebo, okusemqoka kakhulu. Abanye abantu babe ekhanda sore (uma wathinta, noma ngisho ngaphandle kwalo), lapho kuthiwa supercooled kanye imikhuhlane. Kubo egqoke izigqoko lapho kubanda iba saziso. Bunake ukusetshenziswa headgear: omunye imiphumela ezivame kakhulu hypothermia ikhanda elivamile (ngemva otitis, vele) yimpandla. Nokho, ubuhlungu kungaba ubufakazi nezinkinga zempilo ezingathí sina ngokwengeziwe. Futhi uma naye ephelezelwa nezinwele, wena Kuyaphuthuma iseluleko trichologist - wesikhumba ezikhethekile kakhulu ekubhekaneni kuphela izinwele ekhanda. Uma ubuhlungu ihlala ngeviki noma ngaphezulu, bangase kubangelwe izifo ezibangelwa amagciwane - ikakhulukazi, seborrhea. Futhi lesi sifo - liphinde version abangenacala. Kulokhu, impatho ekhanda kungaba kuphela nika uchwepheshe abanolwazi. Kungase futhi kudinge imiphumela eziningana.
Esigabeni esifanayo, kuyafaneleka ukuthi intsha ivame kuyamlimaza ekhanda lapho wathinta, uma Umake dystonia semithambo, kubangelwa ukukhula ngokushesha kakhulu. Kulokhu, ubuhlungu sikhunjuzwe ukuthi isikhathi ingane ukuchitha inkambo esilandelayo amavithamini, magnesium kwagcizelela, futhi abazali kufanele ubuyekeze imodi yokudla okunempilo kanye motor wengane yakhe.
Uma ukwelashwa okukhethekile we ekhanda kufanele ubeke udokotela, "kwabendlu" saloluhlobo ubuhlungu, ungakwazi ukuqeda noma zenze buthakathaka ngokwakho. Okokuqala, uma engahlula, akumele ngesibindi sikhuthazele. Zama ukuqala ukuphuza antispasmodic "prichesochnye" futhi Kholodov zibe kahle esingu "Kodwa-Shpoy" futhi "spazmalgona". Uma ubuhlungu akuyona umsuka spasmodic, ungakwazi "ukubhalisa" ngokwabo noma paracetamol analgin. Ungakhohlwa imaskhi usawoti. Akukhona njalo, kodwa ngesikhathi kuhlaselwa kuphela. Salt kungenziwa alternated nge lwesinaphi: powder slurry buhlanjululwe ukuxoxa amanzi bese ugcine isikhumba ihora linye. Uma ubuhlungu basolwe ukucindezeleka, sebenzisa amafutha anephunga elimnandi lavender, sage kanye marjoram nesokuphumula futhi ukuzinza kwesimiso sezinzwa. Zingase ku dilution ukusetshenziswa self-massage, ngomusa bezihlikihla isixazululo phakathi nogologo.
Uma wahlushwa isimo lapho ekhanda sore touch, kubalulekile ukuba anakekele lesi lokhu akwenzeki futhi. Ukuze uvimbele ukuhlaselwa kungathatha zihlanganisa:
Khipha plastic ikamu kwi ngokhuni - bakholelwa, ezimweni eziningi lolu kuyoba okwanele.
Misa ukusetshenziswa hairdryer nemali eyengeziwe ukuze izinwele, isibonelo, si futhi varnishes ngoba ukupakisha.
Lapho isikhumba obucayi ekhanda ukwenza izinwele kancane emifushane, baze babe nesihawu curls amahle.
Bahlolwe njalo ngesimo semithambo.
Uhlelelwe baphuze amavithamini.
Ukuze sigqoke isizini futhi isimo sezulu.
Gwema isizathu sokukhathazeka (ngangokunokwenzeka).
Ukuhamba, uma lazy kakhulu ukwenza nemidlalo.
Simple, kodwa esisebenza kahle!
Mackerel kuhhavini - iresiphi ukuthi uzokuthanda!
Ukulinganisela umphini: isimiso ukusebenza. Ukulinganisela valve: ngezigaba, izinhlobo, imithetho ukufakwa